Fokontany telo nodoran’ny dahalo: may ny lisi-pifidianana sy vata fandatsaham-bato | NewsMada
Fokontany telo nodoran’ny dahalo: may ny lisi-pifidianana sy vata fandatsaham-bato
Nandritra ny fanafihan-dahalo ny fokontany telo, ao anatin’ny kaominina Soaloka, distrikan’i Miandrivazo, may ny lisi-pifidianana sy ny vata fandatsaham-bato, araka ny tatitra nataon’ny filoha lefitry ny Ceni, omaly. Milaza ho tsy mahafantatra ny fisian’izany tranga izany kosa anefa ny zandary.
Somary mifamahofaho ny zava-nitranga tany Miandrivazo ny 9 oktobra lasa teo. Araka ny tatitra nataon’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, omaly, nisy tokoa ny fanafihan-dahalo tany amin’ny distrika Miandrivazo, tao amin’ny kaominina Soaloka. “Nisy fokontany telo voatafika tamin’izany, ary nisy ny fandoran’ny dahalo tanàna. Maromaro ny may ka tafiditra tamin’izany ny biraom-pifidianana ary nisy fitaovana may vitsivitsy toy ny lisi-pifidianana sy vata fandatsaham-bato”, hoy ny fanazavany.
Nilaza ny Ceni fa efa miomana amin’ny fanoloana ireo fitaovana ireo. “Tsy misy ny atahorana momba ireo fitaovana ireo”, hoy fanamafisana. Amin’ny herinandro ambony io ihany, araka ny voalazany, handray andraikitra amin’ny fanoloana ireo fitaovana ireo ny Ceni.
Tetsy andaniny, nilaza ny avy amin’ny zandarimaria fa trano roa tafo an’olon-tsotra no may tany Soaloka, ny 9 oktobra io, noho ny fiitaran’ny afo avy amin’ny doro tanety. “Tsy may, noho izany, na ny biraom-pokontany na ny efitra heverina hanaovana biraom-pifidianana araka ny resaka miely. Tsy misy ihany koa ny lisi-pifidianana may”, hoy ny zandary.
Mifanohitra, araka izany, ny voalazan’ny avy amin’ny Ceni sy ny zandary. Na izany na tsy izany, endrika fanakorontanana ihany itony trangan-javatra itony. Na tsy nisy aza ny fandoroana, ny resaka aely mety hanakorontana ny saim-bahoaka. Raha tena nisy kosa, loza mitatao ho an’ny fifidianana ho avy eo izany. Aiza ho aiza ny fiarovana any amin’ireo faritra mena be dahalo? Efa nisy ihany ny filazana fa mandray fepetra ny zandary amin’ireo faritra ambanivohitra, saingy raha misy tokoa ny tahaka ity tany Miandrivazo ity, mety hampihena ny mpifidy izany. Manary zo ireo olona tokony hifidy. Andrasana izay fepetra raisina ao anatin’izao fampielezan-kevitra sy amin’ny fotoam-pifidianana, indrindra amin’ny voka-pifidianana.